ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်ကောင်းသည် ဆိုသောဆိုရိုးစကားရှိပါသည်။
သွားများကို မနှုတ်ရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်နည်း အများအပြားရှိပါသည်။ ထိုကာကွယ်နည်းများကို အနှစ်ချုပ်၍ တင်ပြပေးပါမည်။
အဓိကအားဖြင့် သွားများကို ပျက်စီးစေသော ရောဂါကြီး (၃)ခု ရှိပါသည်-
(၁) သွားပိုးစားရောဂါ (Dental Caries)
(၂) ရေစီးကမ်းးပြိုရောဂါ (Periodontitis)
(၃) သွားကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း (Dental Trauma)
ပထမဆုံး သွားပိုးစားရောဂါအကြောင်း တင်ပြပါမည်။ သွားပိုးစားရောဂါသည် ပိုးများကသွားများကို စားခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါမဟုတ်ပါ။ မိမိတို့၏ ကြွေသွားလွှာပေါ်၌ဖြစ်သော Dental Plaque ခေါ်အလွှာ၏ အောက်၌ ပါးစပ်တွင်းရှိမှိုများထဲမှ Lactobacillus Acidophilus နှင့် Streptococcus mutan ပိုး(၂)မျိုးက အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ မိမိတို့စားထားသော အစာများမှ ကစီဓါက် (Carbohydrate) ကို ထိုပိုးများက အချဉ်ပေါက်စေခြင်း (Fermentation) ဖြင့် Lactic Acid ခေါ် အက်ဆစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုအက်ဆစ်က သွား၏ကြွေလွှာတွင်းမှ Calcium (ထုံးကျောက်)ဓါတ်ကို လျော့စေပြီး ကြွေသွားလွှာကိုပျော့စေ ပါသည်။ Decalcification ထိုသို့ဖြစ်ပါက သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အရောင်ပြောင်းခြင်း (အဖြူ၊ အညို၊ အမဲ) တို့ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုမှတဆင့် အတွင်းသို့ နက်ရှိုင်းစွာဝင်ပြီး အပေါက်ဖြစ်ခြင်း (Cavitation) သို့ ရောက်ရှိသွား ပါသည်။ သွားပိုးပေါက်သည် ကြွေသွားလွှာ၌ဖြစ်ပါက မည်သည့်ခံစားမှုမှ မဖြစ်ပါ။ အတွင်းလွှာဖြစ်သည့် ဆင်စွယ် နှစ်လွှာ (Dentine) သို့ရောက်ပါက အစားအစာစားသည့်အခါ အစာ၏အပူချိန်ကိုလိုက်၍ ကျင်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါသည်။ သွား၏အတွင်းပိုင်း မွှသားအထိရောက်ပါက အပြင်းအထန်သွားကိုက်ခြင်း ဝေဒနာကိုခံစားရပြီး ထိုသွားများကို သာမန်ဖာထေးကုသ၍ မရနိုင်တော့ပါ။ သွားအမြစ်တွင်းကုသမှု (Root Canal Treatment -RCT) ဖြင့်သာ ကုသရပါသည်။ တခါတရံ သွား၏ပိုးစားပေါက်အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ သွားအမြစ်တွင်းကုသမှု မပေးနိုင်ဘဲ သွားနှုတ်ကုသရသည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါသည်။
ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Periodontitis ခေါ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သွားအမြစ်နှင့် မေးရိုးကို Periodontal Ligament ဖြင့် တွယ်ထားခြင်းဖြင့် သွားများသည် မေးရိုးတွင်း၌ ခိုင်မြဲစွာ တည်ရှိ နေနိုင်၍ ပုံမှန်တာဝန်များဖြစ်သည့် စားခြင်း၊ ၀ါးခြင်း၊ ကိုက်ဆွဲနိုင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Ligament များရောင်သည့်ရောဂါကို Periodontitis ဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုရောဂါသည် ချက်ခြင်း ဖြစ်တတ်သည့်ရောဂါမဟုတ်ပါ။ တဖြည်းဖြည်းခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ ပထမ သွားဖုံးရောင်တတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သွားဖုံးသားသည် ပုံမှန် ပန်းရောင်မှအနီရောင်၊ နီညိုရောင်၊ ခရမ်းရောင်သို့ ပြောင်းသွားပြီး ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာရောက်လျှင် Periodontal Ligament များပျက်စီး၍ အရိုးများနိမ့်သွားခြင်း (Bone Resorption) ဖြစ်ကာ သွားများယိုင်နဲ့လာတတ်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေကို မကုသပါက သွားနှုတ်ကုသ ရသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိတတ်ပါသည်။ တခါတရံ သွားမနှဲ့မီ သွားဖုံးပြည်တည်နာ (Periodontal Absess) ဖြစ်ကာ သွားနာ သွားကိုက်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ယခုအခါ သုတေသနပြုချက်များအရ (Periodontal Disease) နှင့် နှလုံးရောဂါ အထူးသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (Ischaemic Heart Disease) သည် ဆက်နွယ်နေသည့်အတွက် သွားဖုံးရောဂါရှိပါက နှလုံးရောဂါဖြစ်ရန် အလားအလာ ပိုများ လာကြောင်း သိရှိရပါသည်။
တတိယရောဂါမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာနှင့်မေးရိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါက ဥပမာ- အားကစားလုပ်နေစဉ် ထိခိုက်မိခြင်း၊ ချော်လဲခြင်း၊ မတော်တဆကားတိုက်မှုဖြစ်ခြင်း (Car Accident) တို့ကြောင့် သွားနှင့်မေးရိုးကို ထိခိုက်ပြီး သွားပဲ့သွားခြင်း၊ သွားနှဲ့သွားခြင်း၊ သွားကျိုးခြင်း၊ မေးရိုးကျိုးခြင်းတို့ ဖြစ်စေပြီး မိမိတို့သွားများကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ သွားမညီညာမှုများကြောင့်လည်း သွားကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရပါက အလွယ်တကူ ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ တခါတရံ ထိခိုက်မိသည့် ဒဏ်ပေါ်မူတည်၍ မေးရိုး ကျိုးခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်းတို့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံး ဖြည့်စွက်လိုသောရောဂါမှာ ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါသည် နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ ပါးစောင်၊ သွားဖုံး၊ အရိုးတို့တွင် အဖြစ်များပြီး အချိန်မီကုသပါက အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ခံတွင်းကင်ဆာကို မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နည်းများစွာရှိပါသည်။ ဖြစ်လာပါက စောစောသိလျှင် စောစောကုသပါက အသက်ရှင်ရန်ရာခိုင်နှုန်းများပါသည်။ ခံတွင်းကင်ဆာကုသရာတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှု၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်း (Radiotherapy) ၊ ဓါတ်ဆေးဖြင့်ကုသခြင်း (Chemotherapy) တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် မကုသမီ ကုသမည့်ဘက်မှ အပေါ်အောက်သွားများကို ကြိုတင် နှုတ်ထားရပါမည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့၏ သွားများမနှုတ်ရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် အထက်ပါရောဂါများကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါရောဂါများကို ကာကွယ်ရန် အောက်ပါအချက်များကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်-
(၁) သွားပိုးစားရောဂါမဖြစ်ရန် မိခင်များကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် အာဟာရမချို့တဲ့ရန် အထူးသဖြင့် ဗီတာမင် A, C, D နှင့် Calcium ဓါတ်များ မချို့တဲ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၂) ကလေးငယ်များကို ငယ်စဉ်ကပင် ခံတွင်းသန့်ရှင်းသည့် အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးရန် လိုပါသည်။
(၃) ကလေးနှင့်လူကြီးများအားလုံး အချိုသရေစာများကို လျော့စားရန်နှင့် အထူးသဖြင့် ချို၍စေးကပ်သော အစာများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အကယ်၍ အစာများစားပြီးပါက စားပြီးပြီးခြင်း သွားတိုက်ပါ။
(၄) မိမိတို့၏ ခံတွင်းနှင့်သွားများကို မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းပါ။ သွားမတိုက်မီ Dental Floss ဖြင့် သွားကြားများမှ အစာအကြွင်းအကျန်များကို အရင်ရှင်းလင်းပါ။ အစာစားပြီးတိုင်း ပါးစပ်ကို ပါးလုတ်ကျင်းပါ။
(၅) သွားပိုးစားရောဂါကာကွယ်နိုင်သော ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါ ကာကွယ်နိုင်သော သွားတိုက်ဆေးများကို အသုံးပြုပါ။
(၆) မိမိတို့သွားများကို (၆)လတစ်ကြိမ် သွားဆရာဝန်နှင့် ပြသ၍ စစ်ဆေးမှုခံယူပါ။ သွားပိုပေါက်များရှိနေ ပါက စောစောစီးစီး ဖာထေးထားပါ။
(၇) သွားပိုးစားပေါက်ကြီးသွား၍ မွသားကိုရောက်ပါကလည်း သွားအမြစ်တွင်း ကုသမှုဖြင့် သွားများကို ကုသပြီး Crown စွပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပါ။
(၈) တခါတရံ သွား၏ခေါင်းပိုင်း Crown ပျက်စီးသွားပါက ကျန်သောအမြစ်ပိုင်းကို သွားအမြစ်အတွင်း ကုသမှုပေးပြီး သွားအမြစ်တွင်း Post ထည့်၍ Post & Core ဖြင့် အပေါ်မှ Crown စွပ်နိုင်ပါသည်။
(၉) ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါမဖြစ်အောင် (၆)လတစ်ကြိမ် မိမိတို့၏သွားများကို ကျောက်ခြစ်ခြင်း (Scaling & Root Planning) မှန်မှန်ပြုလုပ်ပါ။
(၁၀) သွားဖုံးရောင်ရောဂါမဖြစ်အောင် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်၍ သွားမှန်မှန်တိုက်ပါ။
(၁၁) တခါတရံ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါသည် ဆီးချိုရောဂါ (Diabetes mellitus) နှင့် ဆက်နွယ်နေတတ်၍ ဆီးချိုရောဂါကို မှန်မှန်သွေးစစ်၍ ကုသမှုခံယူပါ။ သွေးအတွင်း၌ အချိုဓါတ် (Glucose) ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းထားပါ။
(၁၂) သွားဖုံးရောင်ရောဂါသည် သွားမညီညာမှုနှင့်လည်း သက်ဆိုင်နေ၍ သွားမညီညာမှု (Crowding) ရှိလျှင် သွားညှိကုသမှုခံယူပါ။
(၁၃) သွားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းသည် အားကစားလှုပ်ရှားမှု၊ Accident များနှင့်သက်ဆိုင်နေ၍ အားကစား တစ်ခုခုလုပ်လျှင် ထိုအားကစားနှင့်ဆိုငိသော Safety Method များကို သုံးပါ။ ဥပမာ- Boxer များ Gun Shield တတ်ခြင်း၊
(၁၄) သွားများမညီညာမှုရှိလျှင် ဥပမာ- သွားခေါခြင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလွယ်၍ သွားမညီညာမှုများကို သွားညှိကုသမှုဖြင့် ပြင်ဆင်ပါ။
(၁၅) ခံတွင်းကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။ ခံတွင်းကင်ဆာမဖြစ်အောင် အလွန်ပူသော၊ စပ်သော အစာများကို စားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ချွန်ထက်သော သွားများ၊ စိုက်သွားများကို ပြုပြင်ပါ။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ AIDS, Syphilis စသော လိင်နှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများကို မဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အထက်ပါအချက်များကို ရှောင်ကြဉ်လိုက်နာခြင်းဖြင့် သွားနှုတ်ကုသမှုမဖြစ်ရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ် နိုင်ပြီး သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါများမှ ကင်းဝေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာတင်လတ် D.D.S at 8/26/2010 02:36:00 PM No comments:
ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက်ကောင်းသည်ဆိုသော စကားရှိပါသည်။ ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါကို မဖြစ်မီကြိုတင်ကာကွယ်ပါက ဖြစ်မှကုသခြင်းထက် အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါသည် အမျိုးသမီးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာထက် (၃)ဆရှိသည်ဟု စားရင်းဇယားများကဆိုသည်။
ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် အရက်သေစာသောက်စား ခြင်းတို့က ရှေ့တန်းမှနေရာယူထားသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ်ကို ပြောင်းပြန်သောက်ခြင်းအလေ့က ခံတွင်းကင်ဆာကို ပိုမိုဖြစ်စေသည်။ ဆေးငုံခြင်း၊ ကွမ်းစားရာတွင် ဆေးရွက်ကြီးထည့်ခြင်းများသည်လည်း မကောင်းသောအလေ့အကျင့်များ ဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်သောက် ခြင်းသည် ခံတွင်းကင်ဆာအပြင် အဆုတ်ကင်ဆာနှင့် အခြားအဆုတ်ရောဂါများ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါများလည်း ဖြစ်ပွားစေသည်။
အရက်သေစာသောက်စားခြင်း အလေ့အကျင့်သည် လူသားများကို ရောဂါများစွာဖြစ်ပွားစေသော်လည်း အချို့လူများက ဆက်လက်သောက်သုံးနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ခံတွင်းကင်ဆာအပြင် အသည်းရောဂါ၊ အသည်းကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ရောဂါနှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများသည် အရက်ကြောင့်ဖြစ်သည် ဟု သုတေသနပြုသူများကဆိုသည်။
ပါးစပ်တွင်း၌ Ulcer ဟုခေါ်သော အနာလေးများမကြာခဏပေါက်ခြင်းကို Auto Immune ရောဂါကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအနာများသည် (၃)ရက်မှ တပါတ်အတွင်း အလိုအလျောက်ပျောက်သွား တတ်သည်။ ထိုအနာမျိုး တစ်လထက်ကြာပြီး အရွယ်(၁)စင်တီမီတာထက် ကြီးလာလျှင် နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆရာဝန်၊ သွားဆရာဝန်များနှင့် ပြသရန်လိုအပ်သည်။ ပါးစပ်အတွင်း၌ ချွန်ထက်သောသွားများ၊ မကောင်းသောစိုက်သွားများလည်း ထိုအနာမျိုးကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေနိုင်ပြီး ရက်ကြာကြာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပါးစပ်တွင်း၌အနာ ရက်ကြာရှည်ဖြစ်ခြင်း Chronic Ulceration သည်ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်ရန် အခွင့်အလန်း ပိုများစေသည်။
မျိုးရိုးဗီဇသည်လည်း အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ မိမိ၏မျိုးရိုးတွင် ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်ဖူး သူများရှိပါက သတိထားရန်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Pre-cancerous Lesion ဖြစ်သည့် Leukoplakia, Erythroplakia, Licken Planus, ဆေးလိပ် ပြောင်းပြန်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သောအနာနှင့် ဆစ်ဖလစ်ရောဂါများသည်လည်း ခံတွင်း ကင်ဆာရောဂါ၏ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
ယခုအခါ Human Papilloma Virus ကြောင့်လည်း ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ လူအများ ကြောက်ကြသည့် AIDS ရောဂါကြောင့်လည်း ခံတွင်းကင်ဆာ ပိုမိုဖြစ်ပွါးနိုင်သောကြောင့် AIDS ရောဂါ ကိုလည်း သတိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
နေရောင်ခြည်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းသည်လည်း ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်ပွါးစေသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်ကို အသားမဲသောလူမျိုးများက ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသဖြင့် အသားဖြူသည့်လူမျိုးများက နေရောင်ခြည်တွင်ပါဝင်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့် ခံတွင်းကင်ဆာပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် အပေါ်နှုတ်ခမ်းထက် အောက်နှုတ်ခမ်းက ပိုမို၍အဖြစ်များသည်။
အသက်ကြီးသူများတွင် ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်ရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့်အသက်(၄၀)နှစ်နှင့် အထက်တွင် ကင်ဆာရောဂါရှိ-မရှိစစ်ဆေးရန် Cancer Screening လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ အသက်ကြီး၍ ဆေးလိပ်နှင့်အရက်သောက်သုံးသူ များသည် ပို၍အန္တရာယ် ရှိတတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခံတွင်း(ပါးစပ်)အတွင်း၌ မွေးရာပါမှဲ့များသည် အရောင်ပြောင်းလာခြင်း၊ အရွယ်အစားကြီး လာခြင်းတို့သည် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံးပြသင့်သည်။
ခံတွင်းသန့်ရှင်းခြင်း Oral Hygiene သည် ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်း ကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး ညံ့ဖျင်းပါက အထူးသဖြင့်ခံတွင်းကျောက်များ Calculus များက သွားဖုံးရောဂါ၊ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါနှင့် ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွါးနိုင်သည်။
ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါကို Pap Smear ကဲ့သို့ Exfoliative Cytology, Brush Biopsy, Liquid Cytology နှင့် Surgical Biopsy နည်းတို့ဖြင့် အသေအချာအတည်ပြုပေးနိုင်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်- ခံတွင်းကင်ဆာသည် ကြိုတင်ကာကွယ်၍ ရနိုင်သောရောဂါဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ ၍ခံတွင်းကင်ဆာမဖြစ်ရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
(၁) အသက်(၄၀)ကျော်သူများသည် မျိုးရိုး၌ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါရှိဖူးသူများဖြစ်ပါက ခံတွင်းကင်ဆာ ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးဖြင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
(၂) အရက်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ ဆေးငုံခြင်း တို့ကို အမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်း၍ ခံတွင်းကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်သင့်သည်။
(၃) ပါးစပ်အတွင်းမကြာခဏ အနာပေါက်တတ်သူများသည် ရက်ကြာရှည်ဖြစ်နေပါက နီးစပ်ရာဆရာဝန်၊ သွားဆရာဝန်များနှင့် ပြသတိုင်ပင်ပါ။
(၄) လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိတတ်သောရောဂါများကို Safe Sex နည်းလမ်းများဖြင့် ကာကွယ်ပါ။
(၅) နေရောင်ခြည်နှင့် အချိန်ကြာကြာထိတွေ့မှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
(၆) မိမိ၏ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်၍ (၆)လတစ်ကြိမ် ခံတွင်းသန့်ရှင်းခြင်း၊ Regular check-up ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ချွန်ထက်နေသောသွားများနှင့် စိုက်သွားများရှိပါက ကြိုတင်ကုသခြင်း တို့ဖြင့် ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာတင်လတ် D.D.S at 4/27/2010 01:06:00 PM No comments:
ရေခဲရေသောက်သည့်အခါ သွားများကျင်သွားသည့် ခံစားမှုကို လူတိုင်းသိကြသည်။ ထိုခံစားမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်၏ ပုံမှန်သဘာဝဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရေခဲတုံးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်သည့်အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှ အပူများရေခဲတုံးအတွင်း စီးသွားသည့်အတွက် အေးသည်ဟု အာရုံကြောများမှတဆင့် ဦးနှောက်တွင် ခံစားရသည်။
အအေးသောက်သည့်အခါ သွား၏ဒုတိယအလွှာ (Dentine) ရှိ (Dentinal Tubules) များအတွင်းမှ အပူသည် အေးသည့်အရည်အတွင်းသို့ စီးသွားသည့်အတွက် သွားကျင်သည့် ခံစားမှုကိုရရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် သာမန်အပူအအေးများ သောက်သုံးသည့်အခါ အထူးခံစားမှုမရှိပါ။ သွားများ၏အလွှာများ Enamel, Dentine နှင့် Cementum များပျက်စီးမှုရှိသည့်အခါ သွားကျင်သည့်ဝေဒနာ ခံစားရတတ် ပါသည်။
အစားအစာမာမာ စားတတ်သူများ၊ ကွမ်းစားတတ်သူများ၊ ညဖက်သွားကြိတ်တတ်သူများ (Bruxism) တွင် သွားများ၏ ၀ါးသည့်မျက်နှာပြင် (Occlusal Surface) မှ ကြွေသွားလွှာ၊ ဆင်စွယ်နှစ်လွှာများ ပါးတတ်သည်။ ထိုအခြေအနေကို Attrition ဟုခေါ်သည်။
Posted by ဒေါက်တာတင်လတ် D.D.S at 4/09/2010 01:09:00 PM No comments:
ကျွန်ုပ်တို့၏သွားကို ခေါင်းပိုင်း (Crown) နှင့် အမြစ်ပိုင်း (Root)ဟူ၍ ခွဲခြားထားပါသည်။
သွားအမြစ်ပိုင်းတွင်းကုသပေးခြင်းကို ဆေးပညာဘာသာဖြင့် Root Canal Therapy (RCT) ဟုခေါ်ပါသည်။
သွားများကိုအလွှာအားဖြင့် ကြွေသွားလွှာ (Enamel) နှင့်ဆင်စွယ်နှစ်လွှာ (Dentine) ဟုခွဲခြားထားသည်။ ဆင်စွယ်နှစ်လွှာ၏ အတွင်း၌မွသား (Pulp) ရှိပြီး မွသားအတွင်းသွေးလွှတ်ကြော၊ သွေးပြန်ကြောနှင့် အာရုံကြောများရှိသည်။
သွားပိုးစားရောဂါဖြစ်သည့်အခါ ကြွေသွားလွှာပျက်စီးလျှင် မည်သည့်ခံစားမှုမှမဖြစ်ဘဲ၊ ဆင်စွယ်နှစ်လွှာ ရောက်သည့်အခါ သွားကျင်ခြင်းဝေဒနာခံစားရ၍ မွသားရောက်သည့်အခါ အာရုံကြော၊ သွေးကြောများ ရောင်ပြီး သွားကိုက်သည့်ဝေဒနာကို ခံစားရပါသည်။
မွသားရောင်သည့်ရောဂါကို Pulpitis ဟုခေါ်သည်။ မွသားရောင်သည့် အခြေအနေရောက်လျှင် သာမန်သွားဖာထေး၍ ကုသမရတော့ဘဲ သွားအမြစ်အတွင်းအထိ ကုသရသည်။
သွားအမြစ်တွင်းကုသမှုပေးရာတွင် သွား၏အတွင်းပိုင်း မွသားအထိရောက်အောင်ဖောက်၍ File ဟု ခေါ်သည့်ကိရိယာလေးများဖြင့် သွားအမြစ်တွင်းမှ မွသားအတွင်းရှိ အာရုံကြောနှင့်သွေးကြောများကို အကုန်ရှင်းလင်းအောင် ထုတ်ရသည်။ အားလုံးပြောင်စင်သွားသည့်အခါ သွားအမြစ်တွင်းမှ ဆင်စွယ် နှစ်လွှာကို ပြောင်စင်အောင်သန့်ရှင်းပြီးမှ သွားအမြစ်ထိပ်ထိရောက်အောင် Gutta Percha ဖြင့်ပိတ်လိုက်ရသည်။ Gutta Percha ဖြင့်ပိတ်သည့်အခါ လိုအပ်သည့် Sealer ကိုအသုံးပြုရပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာတင်လတ် D.D.S at 3/12/2010 03:05:00 PM 1 comment:
တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်၏ဆေးခန်းသို့ မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်အမျိုးသားကြီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာပါသည်။ ခရီးရောက်မဆိုက် သူမေးလိုက်သည့်မေးခွန်းမှာ "ဆရာ သွားနှုတ်ရင် မျက်စိထိခိုက်တတ်ပါသလား" ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏မေးခွန်းကို ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဖြေကြားလိုက်ပါသည်။ အဖြေမှာ သွားနှုတ်လျှင် မျက်စိမထိခိုက်နိုင်ပါ။ သို့သော်- ရှင်းရန်ရှိပါသည်။
သွားနှုတ်၍မျက်စိမထိခိုက်သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်၏ အရေးကြီးသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သက် ဆက်စပ်မှုအရေးကြီးပုံကို ရှင်းပါမည်။
ခန္ဓာဗေဒကျမ်းစာအုပ်ကြီးအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးခေါင်းခွံရိုးကို ဦးခေါင်းပိုင်းနှင့် မျက်နှာပိုင်းဟူ၍ ခွဲခြား ထား ပါသည်။ ဦးခေါင်းပိုင်း၌ ဦးနှောက်ရှိ၍ အပေါ်မှအရိုးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ မျက်နှာပိုင်းကို (၃)ပိုင်း ထပ်ခွဲထားရာ-(၁) နဖူးနှင့်မျက်စိသည် အပေါ်ပိုင်း၊ (၂) နှာခေါင်းနှင့် အပေါ်မေးရိုးသည် အလယ်ပိုင်း၊ (၃) အောက်မေးရိုးသည် အောက်ဆုံးပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
နှာခေါင်း၏ အပေါ်ဆုံး (နှာခေါင်းရင်း)မှ နှုတ်ခမ်းထောင့် (Angles of the Mouth) အထိကို ပုံဆွဲ လိုက်လျှင်တြိဂံပုံ (Triangle) ရပါသည်။ ထိုတြိဂံကို Danger Triangle ဟုခေါ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် Emissary Veins ခေါ် သွေးပြန်ကြောလေးများရှိပါသည်။ ထိုသွေးပြန်ကြောများသည် ဦးနှောက် ၏အောက်ခြေ၊ ဦးခေါင်းခွံရိုးအတွင်း၌ရှိသော Cavernous Sinus (သွေးပြန်ကြောစုထုံး)နှင့် ဆက်သွယ် နေပါသည်။ ထိုတြိဂံအတွင်း၌ မျက်နှာပေါ်တွင်၎င်း၊ နှာခေါင်းအတွင်း၌၄င်း၊ ပါးစပ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းအတွင်း၌ ၄င်း Infection ရှိပါက ထိုသွေးပြန်ကြောလေးများ (Emissary Veins) က Cavernous Sinusအထိ သယ်ဆောင်သွားတတ်၍ Cavernous Sinus Thrombosis ခေါ် အသက်အန္တာရယ်ကို ထိခိုက်နိုင်သော အခြေအနေ ဖြစ်စေပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာတင်လတ် D.D.S at 2/26/2010 01:52:00 PM No comments:
တခါတရံပုံမှန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း Checkup အတွက်ဓါတ်မှန် xray ရိုက်သည့်အခါအဆိုပါ ကျောက်ခဲများကို မြင်ရပါသည်။ ပါးစပ်အတွင်း သွားဖုံး၏အောက်၌ရောက်နေ၍ သာမာန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော်လည်း ပို၍ထူလာသောအခါသွားဖုံး၏ အပေါ် (Supra gingival) အဖြစ် တွေ့မြင်ရပါသည်။
ထိုကျောက်များကို Calculus သို့မဟုတ် Tar Tar ဟုခေါ်ပါသည်။ လူတိုင်း၏ပါးစပ်(ခံတွင်း)ထဲ၌ ထိုကျောက်များအနည်းနဲ့အများရှိတတ်ပါသည်။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်သူများ၌နည်း၍ ဂရုမစိုက်သူများ၌ များတတ်ပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာတင်လတ် D.D.S at 2/09/2010 11:22:00 AM No comments:
ကျွန်ုပ်တို့ခံတွင်းအတွင်း၌ အပူနာလေးများ မကြာခဏပေါက်ဖူးကြပါလိမ့်မည်။ လျှာ၊ ပါးစောင်၊ အပေါ်အောက်နှုပ်ခမ်း အတွင်းဖက်တို့မှာ အဖြစ်များတတ်ပါသည်။ ၂ရက် ၃ရက်ခန့်နာပြီး တပါတ်အတွင်း ပျောက်သွားတတ်ကြသည်။ ထိုအနာလေးများကို မြန်မာများက အပူနာဟုခေါ်ပြီး မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အပူအပုပ်များ၍ ဖြစ်သည်ပာုယုံကြည်ကြပါသည်။မြန်မာ ဘယဆေးများဖြစ်သည့် အပုပ်ကျဆေး၊ ၀မ်းနှုပ်ဆေးများသုံးစွဲတတ်ကြပါသည်။
အနောက်တိုင်းဆေးပညာအနေဖြင့်Apthous Ulcer ပာုခေါ်သည်။ မိမိတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အမြှေးပါး ( Mucosa ) ပေါ်တွင် တခုခု ထိခိုက်မိလို့သော်လည်းကောင်း၊ Cell ကလပ်စည်းများပျက်င်္စီးခြင်း ကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ မိမိခန္ဓာကိုယ် နှင့် AutoImmune Reaction ဖြစ်ပြီး ထို Ulcer လေးများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထို Ulcers (အပူနာလေးများ) ဖြစ်တတ်ပါသည်။
Posted by ဒေါက်တာတင်လတ် D.D.S at 7/29/2009 11:22:00 AM 1 comment:
Dr. Tin Latt D.D.S
Graduated from University of Dental Medicine, Yangon, Burma in Dec 1975(7th Batch). Fellow of the Royal Society of Health July 1993. Certificate in Orthodontics (POS) Jan 2009. Office Address: Golden Dragon Family Dentistry 871 S. Atlantic Blvd, Monterey Park CA 91754, Tel-Fax: 626-284-4200/626-284-4700 Previous Positions: Dental Surgeon (Department of Health Services,Burma) Clinical Instructor (Department of Conservative Dentistry)University of Dental Medicine, Yangon, Burma. Dental Surgeon (Black River Hospital)Black River St. Elizabeth, Jamaica. Clinical Director/ Senior Lecturer,Dental Auxiliary School Kingston Jamaica.